कत्रो कपाल ! - विदेशबाट - नेपाल
लामो कपालकै कारण गुजराती नीलांशीलाई उनका साथीहरुले चर्चित कार्टुन पात्र 'राम्पुञ्जेल’ भन्दै आएका छन् । 'मानिसहरु मलाई लामो कपालका कारण, समस्या उत्पन्न हुन्न ? भन्दै प्रश्न गरिरहन्छन् ।’ उनी मुस्कुराउँछिन्, 'कपालकै कारण मलाई समस्या भएको छैन । धेरै खेल्छु र दौडधूपमा हुन्छु । कपाल मेरा लागि लक्की चार्म हो ।’ खेलकुदमा भाग लिँदा कपाललाई गुजुल्टो पार्ने गरेको उनले बताइन् ।